izay hotontosaina any amin’ny Estadio Metropolitano any Madrid ny 01 jona 2019, ny tongotra anilan’ny Ajax Amsterdam sy ny Fc Barcelone. Ny Ajax d’Amsterdam Néerlandey tamin’ny talata 30 aprily 2019 teo dia nandresy tao an-taniny ny ekipa Anglisy, ny Tottenham Hotspur 1-0 tamin’ny alalan’ny baolina matin’i Doony Van de Beek. “Tsy mbola tena tafita izahay, hoy ny mpanazatra ny Ajax, Erik Ten Hag, fa eto antsasa-dalana na dia teo aza ny vokatra tsara azo tany an-tanin’olona”. Mbola mikendry ny fivadihan-drasa na “remontada” kosa ny Tottenham, hoy i Mauricio Pochettino mpanazatrany :”Tsy mbola rendrika izahay fa resy tamin’ny baolina tokana monja ka handraikitro tanteraka ny fanarenana ny lesoka”. Ny Fc Barcelone kosa dia nandresy mazava ny ekipan’ny Liverpool Anglisy ihany koa 3-0 be izao tamin’ny alalan’ny baolina 1 matin’i Suarez sy baolina 2 matin’i Messi. Io no “doublé” faha-125 vitany hatramin’izay nilalaovany ary feno 600 tamin’io lalao io ny baolina matiny tao anaty klioba.